कस्को नामको मेहेन्दी लगाइन् प्रियंका कार्कीले ? – Fewa Times
कस्को नामको मेहेन्दी लगाइन् प्रियंका कार्कीले ?
प्रकाशित मिति: December 2, 2019 1:44 pm
काठमाडौँ – मंसिर महिनालाई बिहेको महिना पनि भनिन्छ । अहिले चारैतिर बिहेको माहोल चलिरहेको बेला हाल अमेरिकामा रहेका गीतकार तथा संगीतकार सुरेश घोन्डे गुरुङले “मेहेन्दी” बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन । गीतमा आफ्नो प्रिय मान्छेको नाममा मेहेन्दी लगाउने केटी मान्छेको उत्सुकता , चंचलता , प्रेम को भाव गीत र म्युजिक भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व सुरेश घोन्डे गुरुङ गीतकार, संगीतकारका अलावा मोडेल, भिडियो सम्पादक तथा निर्देशक समेत हुन् । यसअघि “भाचिदेउ कि बारुली कम्मर” बोलको बोलको गीत सार्वजनिक गरेर चर्चा कमाएका गुरुङले मेहेन्दी गीतबाट स्रोता तथा मिडिया हाउस बाट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा साथको अपेक्षा गरेका छन । सुरेश घोन्डेगुरुङको अफ़िसिएल युट्युव च्यानल मार्फत भिडियो सार्वजनिक भएको हो।